Home Wararka Gudaha DFS & Dowlad Goboleedyada oo Shir ka yeeshay Amniga dalka
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Amniga Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali Axmad ayaa shir Gudoomiyay shir socday muddo laba maalin ah oo ay ka qayb galeen Wasiirada Amniga Gudaha heer Dowlad Goboleed, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Soomaaliya Yuusuf Cali, Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, Saraakiil Booliis oo ka kala socotay dowlad goboleedyada.
Sidoo kale waxaa shirka goobjoog ka ahaa Hay’adaha UN-ka iyo Deeq bixiyayaasha taakuleeya Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed labadiisa heer, waxaana shirka diirada lagu saarayay sidii la isaga kaashan lahaa guud ahaan amniga dalka iyo la-dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Amniga Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali Axmad ayaa sheegay in ujeedka shirka uu ahaa sidii deeq bixiyaasha Caalamiga ah ay u wadi lahaayeen taageerida Ciidamada Booliska & Amniga dalka taasina ay isku afgarteen.
Wuxuu hadalkiisa uu intaasi kudaray in Hay’adaha UN-ka iyo deeq bixiyaasha intaba ay u gudbiyeen in Madaxweyne Xasan Sheekh muhiimadiisa koowaad uu yahay in uu waxka qabto Amniga dalka, isla markaana dhankooda deeq bixiyeyaasha ay aqbaleen baaqa ay u soo jeediyeen.
Ugu dambeyn Wasiiru Dowlaha ayaa u mahad celiyay dhamaan kasoo Qaybgalayaasha Shirka, wuxuuna si gaara ugu mahadceliyay Wasiirada Amniga ee Dowlad Goboleedyada oo muujiyay xilkasnimo iyo Wadashaqeyn wanaagsan oo kadhaxeeyso.
Soomaaliya ayaa dhibaatada ugu daran ee heysata waxaa ay tahay dhinaca Amniga, waxaana dowladihii dalka soo maray aysan ku guuleysan inay waxka qabtaan Amni darrada kajirta Soomaaliya, hayeeshee Shacabka Soomaaliyeed ay ka war sugayaan dowladda Cusub ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
2018-kii Mukhtaar Rooboow oo lagasoo qaaday Sawirkii ugu horreeyey.